Home » Lahatsoratra farany farany » Tsindrio eto raha ity ny fanambaranao an-gazety! » Fahasalamana maneran-tany: Tontolo Vaovao Taorian'ny COVID
Herintaona mahery taorian'ny nanombohan'ny valan'aretina COVID-19, izao tontolo izao dia maka lesona nianarana mba hanampiana amin'ny fanarenana eran-tany ary hisorohana ireo fahadisoana mitovy amin'izany tsy hitranga indray amin'ny toe-pahasalamana tsy azo ihodivirana.
Fahasalamana: Safidy Politika - Siansa, Firaisankina, Vahaolana, ny lohateny farany amin'ny andian-dahatsoratra novokarina tamin'ny fiaraha-miasa amin'ny Fikambanana Iraisam-pirenena Momba ny Fahasalamana, dia mandinika ny fomba hiarovana tsara indrindra ny vondrom-piarahamonina eran-tany amin'ny tsy fahombiazana hita mandritra ny areti-mifindra ary mitady vahaolana mifototra amin'ny siansa izay asa ho an’ny rehetra. Ny famoahana voalohany amin'ny andiany dia niantso ny fandrakofana ara-pahasalamana manerantany, raha ny faharoa kosa niantso ireo mpitondra eran'izao tontolo izao mba hiray hina amin'ny valintenin'izy ireo amin'ny COVID-19.
Toy ny tamin'ny fanontana teo aloha, ny famoahana dia manasongadina lahatsoratra voatokana avy amin'ny andiana mpanoratra malaza. Anisan'izany i Tedros Adhanom Ghebreyesus, tale jeneralin'ny OMS, Amina J Mohammed, sekretera jeneraly lefitry ny Firenena Mikambana, ary ny Right Honorable Gordon Brown, masoivohon'ny OMS ho an'ny famatsiam-bola ara-pahasalamana eran-tany ary praiminisitra teo aloha tany Royaume-Uni.
Ny fizarana 'Firaisankina' dia mandinika ny fampiasam-bola amin'ny fiarovana ara-pahasalamana ho avy sy ny fomba fiasa vaovao izay mety hanokatra ny lalana mankany amin'ny Fahasalamana ho an'ny Rehetra. Ao amin'ny fizarana 'Siansa', ireo mpanoratra anisan'izany i Carlos Alvarado Quesada, filohan'ny Repoblikan'i Costa Rica, dia mandinika ny fomba ahafahan'izao tontolo izao mandroso miaraka amin'ny lesona avy amin'ny lasa sy ny antony tsy maintsy hihoatra ny sisintany ny fitsaboana. Ny fizarana 'Vahaolana' dia mijery ny fomba ahafahantsika mampandroso ny fahasalamana amin'ny fikarakarana ny zavaboahary sy ny antony tsy maintsy raisintsika ho zava-dehibe ny loza ateraky ny fanoherana mikraoba.
Fahasalamana: Safidy Politika - Siansa, Firaisankina, Vahaolana dia famoahana ofisialin'ny Tetikasa Fitondrana Maneran-tany novokarina niaraka tamin'ny Fikambanana Iraisam-pirenena Momba ny Fahasalamana. Ny Global Governance Project dia fiaraha-miasa eo amin'ny GT Media Group, orinasam-panontana any Londres, ny Global Governance Program miorina ao amin'ny Oniversiten'i Toronto, ary ny Global Health Center ao amin'ny Graduate Institute of International and Development Studies any Genève.